The Voice Myanmar by popolay.com
With million of TV & Online viewers all over the world, The Voice is one of the biggest international TV format and now it's arrived in Myanmar by MRTV4.
Ip Shen Paung - ဆူးလေး
21 พ.ค. 2561 | 1,658 Views
ပဝါမကူရေမရှုတဲ့ Battle Round နောက်ဆုံးည
21 Apr 2018 | 3,248 views ဒီနေ့ညကတော့ The Voice Myanmar ရဲ့ Battle Round နောက်ဆုံးညဖြစ်လို့ အရင်အပတ်တွေကထက် ပိုပြီးရင်ခုန်နေမိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ Battle Rounds ရွေးချယ်ခဲ့မှုတွေမှာ ပရိသတ်နဲ့ နည်းပြတွေရဲ့အကြိုက် အနည်းငယ် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ ထပ်တူကျ
Hot This Week ထဲ ဝင်သွားကြတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးများ
11 Apr 2018 | 3,375 views ဒီတစ်ပတ် Battle Round ပြီးကထဲက The Voice Global ရဲ့ “Hot This Week” ထဲကို ဘယ်အတွဲများ ရွေးချယ်ခံရမလဲလို့ ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ ရင်ခုန်တယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလဲ ကျိမ်းသေပေါက် ဝင်မယ်လို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ အတွဲနှစ်တွဲ ရှိနေတာကြောင့်ပါ။
ဒီတစ်ပတ် Battle Round ကို စိတ်ခိုင်မှ ကြည့်ပါ...!
07 Apr 2018 | 3,590 views The Voice Myanmar ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Battle Round ကို မကြည့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဒီနေ့ည ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခု လွတ်သွားတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
The Voice Global ရဲ့ Hot This Week မှာ နေရာယူသွားတဲ့ “အမုန်းမြို့သူ”
05 Apr 2018 | 2,167 views The Voice Myanmar ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က “Battle Round” ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာ အတွဲတွေအားလုံး ကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် The Voice Global ကတော့ “Hot This Week” အတွက် အကောင်းဆုံး အတွဲတစ်တွဲပဲ ရွေးချယ်ပါတယ်။
The Voice Myanmar က တစ်ခြား The Voice တွေနဲ့ ဘာကြောင့်မတူရတာလဲ..?
04 Apr 2018 | 1,952 views ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က The Voice Myanmar Battle Round ကို ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ နိုင်ငံတစ်ကာက The Voice ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ရွေးချယ်မှုအပေါ် ပရိသတ်အချို့ အစာမကြေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
19 Apr 2019 | 3,412 Views
19 Apr 2019 | 1,472 Views
19 Apr 2019 | 8,403 Views
19 Apr 2019 | 10,556 Views
19 Apr 2019 | 3,660 Views
နန်းဇာခြည်လင်း - အင်တာဗျူး
22 Mar 2018 | 809 views
The Voice Myanmar နည်းပြတွေ ဘာကြောင့်အဝတ်အစားမလဲတာလဲ..?
14 Mar 2018 | 2,665 views ဒီမေးခွန်းက The Voice Myanmar အစီအစဉ်ကို အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အရမ်းသိချင်နေကြတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
နည်းပြလေးဦး ရွေးရခက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Blind Audition အပိုင်း(၃)
04 Mar 2018 | 2,216 views The Voice Myanmar ရဲ့ Blind Audition တတိယအပတ်ကို ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ် နည်းပြတွေရဲ့ အရည်အသွေးဆန်းစစ်မှုတွေ ပိုပိုစိစစ်လာတယ်လို့ ခံစားလာရပါတယ်။
နီနီခင်ဇော်ကို ဇဝေဇဝါဖြစ်စေခဲ့တဲ့ “အစ်ရှမ်းပေါင်း”
28 Feb 2018 | 1,862 views တောင်ပ်ါဘုရားကျောင်းက ဆရာမလေး “အစ်ရှမ်းပေါင်း” က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လာရှိုးမြို့ကနေ The Voice Myanmar ဆီကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ရောက်လာခဲ့သူတစ်ဦးပါ။
“အိုအီရှိ” က ဘာကြောင့် ရက်ပ်ပါကြီးကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ..?
28 Feb 2018 | 1,930 views Blind Audition ဒုတိယအပတ်မှာ နည်းပြလေးဦးလုံးက ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး သူတို့အားလုံး သည်းသည်းလှုပ်လိုချင်ခဲ့ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ “Oishi” အိုအီရှိ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကို မနားတမ်းဆက်မက်နေတဲ့ “ခိုင်မြဲသစ္စာ”
28 Feb 2018 | 1,935 views ပြိုင်ပွဲဝင် “ခိုင်မြဲသစ္စာ” ဟာ မန္တလေးမှာ နာမည်ရနေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘဝရပ်တည်မှု ခိုင်မာနေပေမယ့် အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ကိုတော့ အမြဲလိုလိုဆက်မက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ข่าวทั้งหมด 30 ข่าว3หน้า